11 လအတွင်း 1 လွန်ခဲ့တဲ့သီတင်းတပတ် #388 by Colonelwing
။ အဆိုပါ Eurofighter တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း   အဆိုပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ပြီးသုံးကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစုကထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အင်ဂျင်နှစ်လုံးတပ်, canard-မြစ်ဝကျွန်းပေါ်တောင်ပံ, တိုက်လေယာဉ်ဖြစ်၏ EADS, Alenia Aeronautica နှင့် 1986 ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့်ပူးတွဲကိုင်ဆောင်ကုမ္ပဏီ, Eurofighter Jagdflugzeug GmbH, မှတစ်ဆင့်စီမံကိန်းနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်ရေးရာအများစုကျင်းပသူအ BAE Systems ကုမ္ပဏီ၏။ အဆိုပါစီမံကိန်းသည်နေတိုးတပ်ဖွဲ့ Eurofighter နှင့်လည်းချုပ်ဖောက်သည်အဖြစ်ပြုမူရသောလေဆင်နှာမောင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီ, ကစီမံခန့်ခွဲတာဖြစ်ပါတယ်။ 
လေယာဉ်၏ဖွံ့ဖြိုးရေးထိထိရောက်ရောက်အနာဂတ်ဥရောပတိုက်လေယာဉ်အစီအစဉ်အတွက်, ဂျာမနီ, ပြင်သစ်, ဗြိတိန်, အီတလီနှင့်စပိန်တို့အကြားတစ်ဦးနိုင်ငံစုံပူးပေါင်းကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့်အတူ 1983 အတွက်စတင်ခဲ့သည်။ ကြောင့်ဒီဇိုင်းအခွင့်အာဏာကိုကျော်သဘောထားကွဲလွဲခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်လိုအပ်ချက်များ, ပြင်သစ်လွတ်လပ်စွာအစား Dassault Rafale ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လုပ်ငန်းစုထားခဲ့တယ်။ တစ်ဦးကနည်းပညာသရုပ်ပြလေယာဉ်သည်ဗြိတိသျှလေကြောင်း EAP, ပထမ6သြဂုတ်လ 1986 အပေါ်လေယာဉ်ခရီးစဉ်ကို ယူ. , အဆိုပါအပြီးသတ် Eurofighter ၏ပထမဆုံးရှေ့ပြေးပုံစံ 27 မတ်လ 1994 အပေါ်၎င်း၏ပထမဆုံးပျံသန်းမှုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ လေယာဉ်, တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း၏အမည်, တရားဝင်စက်တင်ဘာလ 1998 အတွက်မွေးစားခဲ့သည်; ပထမဦးဆုံးထုတ်လုပ်မှုကန်ထရိုက်ကြောင်းထိုနှစ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါမိတ်ဖက်တပါးအမြိုးသားနိုင်ငံရေးကိစ္စများသိသိသာသာတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းရဲ့ဖှံ့ဖွိုးတိုးတပေါ်ထွက်လာသောကြောင့်ရှည်ကြာ; စစ်အေးတိုက်ပွဲ၏ရုတ်တရက်အဆုံးတိုက်လေယာဉ်များအတွက်ဥရောပဝယ်လိုအားလျှော့ချ, နှင့် Eurofighter ၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အလုပ်ရှယ်ယာအပေါ်ဆွေးနွေးငြင်းခုံရှိ၏။ အဆိုပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း 2003 အတွက်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဝန်ဆောင်မှုသို့စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိတွင်အမျိုးအစားကိုသြစတြီးယားလေတပ်, အီတလီလေတပ်, ဂျာမန်လေတပ်, တော်ဝင်လေတပ်, စပိန်လေတပ်နှင့်တော်ဝင်ဆော်ဒီလေတပ်နှင့်အတူဝန်ဆောင်မှုထဲသို့ဝင်ခဲ့သည်။ အိုမန်၏တော်ဝင်လေတပ်ကိုလည်း 571 ၏အဖြစ် 2013 လေယာဉ်ပျံရန်ဝယ်ယူရေးစုစုပေါင်းဆောင်ခဲ့တစ်ခုပို့ကုန်ဖောက်သည်အဖြစ်အတည်ပြုခဲ့သည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Eurofighter Jagdflugzeug GmbH (အင်္ဂလိပ်: Eurofighter တိုက်လေယာဉ်လေယာဉ်တင် GmbH), ဒီဇိုင်း-ထုံးစံပူးတွဲတဲ့နိုင်ငံစုံကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် Eurofighter တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း၏ upgrade, ဒီ EuroJet Turbo GmbH ကဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်သည့်ဂျက်လေယာဉ်အင်ဂျင်ထည့်သွင်းပါဝင်သည်။
[ကိုးကားလိုအပ်] 1986 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးကြောင့် Hallbergmoos, Bavaria, ဂျာမနီအတွက်၎င်း၏ဦးခေါင်းရုံးရှိပြီး  အဆိုပါကုမ္ပဏီလေးခု Eurofighter မိတ်ဖက်တပါးအမျိုးသားတို့၏အဓိကအာကာသကုမ္ပဏီများကပိုင်ဆိုင်သည်။ :
33% EADS Deutschland GmbH (ဂျာမနီ)
13% EADS CASA (စပိန်)
33%: BAE Systems ကုမ္ပဏီ၏ (ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း),
21%: Alenia Aermacchi (အီတလီ)
သြစတြီးယားလေတပ် - 15  ကယ်နှုတ်တော်မူ၏
ဂျာမန်လေတပ် - 143 100 ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 ၏အဖြစ်ကိုအပ်ခဲ့ကြရာ, အမိန့်ထုတ်  ။
အီတလီလေတပ် - 96 အမိန့်, 62 မေလ 2012  ၏အဖြစ်ကိုအပ်ခဲ့ကြရာ
20º Gruppo Caccia OCU Tactical လေယာဉ်မှူးသင်တန်းနှင့်အကဲဖြတ် 
တော်ဝင်ဆော်ဒီလေတပ် - 72 24 ဧပြီလ 2013 ၏အဖြစ်ကိုအပ်ခဲ့ကြရာ, အမိန့်ထုတ်  ။
စပိန်လေတပ် - 73 45 ပေးပို့ပြီးပါပြီသော, အမိန့်ထုတ်  ။
ala 11, ရှိနေပြီးအခြားနိုင်ငံ-Morónလေတပ်အခြေစိုက်
113 တပ်မှ, OCU Tactical လေယာဉ်မှူးသင်တန်းနှင့်အကဲဖြတ် 
ala 14, Albacete-အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los Llanos လေတပ်အခြေစိုက်
160 ဇန်နဝါရီလ 100   ၏အဖြစ်ကိုအပ်ခဲ့ကြရာ 232 အမိန့်ထုတ် [ကိုးကားလိုအပ်] - တော်ဝင်လေတပ်
RAF Coningsby, Lincolnshire, အင်္ဂလန်။
အမှတ်3တပ်မှ RAF 
အမှတ် 11 တပ်မှ RAF 
အမှတ် 29 တပ်မှ RAF OCU Tactical လေယာဉ်မှူးသင်တန်းနှင့်အကဲဖြတ် 
အမှတ် 41 တပ်မှ RAF စမ်းသပ်ခြင်း & အကဲဖြတ်တပ်မှ 
RAF Leuchars, Fife, စကော့တလန်။
အမှတ် 1 တပ်မှ RAF 
အမှတ်6တပ်မှ RAF 
RAF တောင်ပေါ်မှာသာယာသောအရှေ့ဖော့, ဖောက်ကလန်ကျွန်းစု
အမှတ် 1435 ပျံသန်းမှု RAF (ဖောက်ကလန်ကျွန်းစု) 
အမှတ် 17 တပ်မှ RAF OCU Tactical လေယာဉ်မှူးသင်တန်းနှင့်အကဲဖြတ် 
အိုမန်၏တော်ဝင်လေတပ် - 12 အမိန့်ထုတ်  ။
11 လအတွင်း 1 လွန်ခဲ့တဲ့သီတင်းတပတ် #390 by JanneAir15
ဒါကအကောင်းတစ်ဦးတိုက်လေယာဉ်ဖြစ်ပါသည်ဒါပေမယ့်ငါပို Dassault Rafale နဲ့တူလုပ်ပါ။
အကြှနျုပျ၏ကွန်ပျူတာအသစ်: CPU ကို: AMD ၏ Ryzen71700X | motherboard: ASUS ကချုပ် X370 Pro ကို | ရမ်:, G ကျွမ်းကျင်မှု Ripjaws V ကို 16GB 3200MHz @2933MHz | graphics card: ASUS က GeForce GTX 1070 Dual-| သိုလှောင်မှု: Samsung က 850 EVO 250GB SSD ကို + Western Digital က 1TB WD အပြာရောင် HDD | PSU: EVGA ဆူပါနိုဗာ 750 G2 750W | OS ကို: Windows ကို 10
11 လအတွင်း 1 လွန်ခဲ့တဲ့သီတင်းတပတ် #391 by Colonelwing
အဆိုပါ Dassault / FA10, FA20, FA50 ထုတ်ကုန်ငါ၏အအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်ပျံသန်း & သူတို့သည်များစွာသောစက်ဖြစ်ကြောင်းသဘောတူသည်။
Dassault Rafale vs Eurofighter တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း။
Eurofighter ဗြိတိန်, ဂျာမနီ, စပိန်နှင့်အီတလီတို့ကဖန်ဆင်းသည်။ Rafale ပြင်သစ်နိုင်ငံလုပ်ဘယ်မှာအဖြစ်။
ရွှင်လန်း & Gentelmen တွင်ယူသွား!
Dassault Rafale vs Eurofighter တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း
11 လအတွင်း2days ago #447 by pramodh
တကယ်ကသူ့လေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုလည်းနိုင်ငံအားလုံးအားဖြင့်အသုံးဖြစ်နှင့်ပင် fsx / fsx se / p3d အတွက်နိုင်အောင်ကောင်းလှ၏ :)
0.095 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်